မီးပန်းဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ သိမှတ်ဖွယ်အချက် ဆယ်ချက် – Digital Photography Myanmar
HomeTips & Tutorialsမီးပန်းဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ သိမှတ်ဖွယ်အချက် ဆယ်ချက်
July 8, 2016 Zaw Tips & Tutorials 0
ဓာတ်ပုံဆရာ စတီးဝတ် မာဒ္စင် ကိုလန်ဒန်မြို့ရဲ့ PR ကန်ပနီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ London & Partners ကနေပြီးတော့ ၂၀၁၆ နှစ်သစ်အကြိုမီးပန်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ နေရာရွေးချယ်မှုနဲ့ ဆက်စပ်အဓိပ္ပါယ်ရှိမှုဟာလဲ setting တွေနဲ့ post processing နဲ့အတူတူပဲအရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။
မီးပန်းရိုက်ဖို့ ကင်မရာအပြင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေ အရေးကြီးပါတယ်။
1. Tripod လို့ခေါ်တဲ့ သုံးခြောင်းထောက်ထရိုင်ပေါ့
ထရိုင်ပေါ့မရှိပဲ မီးပန်းကိုဓာတ်ပုံ ကောင်းကောင်းရိုက်လို့မရပါဘူး။ ရှပ်တာစပီးကြာကြာရိုက်ရမှာမို့ မိတ်ဆွေရဲ့ကင်မရာလှုပ်နေရင် ဘယ်လိုမှရိုက်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
2. Remote release လို့ခေါ်တဲ့ ကင်မရာကိုမထိပဲ ရိုက်လို့ရတဲ့ရီမှုတ်
ကင်မရာကိုငြိမ်အောင်ထားဖို့ ထရိုင်ပေါ့ကိုလိုသလို remote shutter release ကိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ သင်မထင်မိပေမဲ့ ကင်မရာပေါ်ကခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ကင်မရာလှုပ်ခါသွားပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကဝါးသွားမှာပါ။ shutter release မရှိပါက နှစ်စက္ကန့်တိုင်မာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တိုင်မာကို စောင့်နေရလို့ ပုံတွေလွတ်သွားမှာတော့သေချာပါတယ်။
ဒီပုံကိုထရိုင်ပေါ့မပါပဲရိုက်ထားတာပါ။ ကင်မရာလှုပ်လို့ ပုံဝါးနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Canon 60D, Sigma 18-270mm. Hong Kong Chinese New Year 2015
ဓာတ်ပုံ ရိုက်မယ့်နေရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာ မီးပန်းဓာတ်ပုံတစ်ခုရဲ့အရေးအကြီးဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မီးပန်းတွေဘယ်နေရာမှာပေါက်ကွဲမလဲဆိုတာကိုကြိုတွက်ရမည့်အပြင် ပုံရဲ့အရှေ့မှာ ဘာရှိနေမယ်ဆိုတာကိုလဲ ကြိုတွက်ရပါမယ်။ ဆက်စပ်အဓိပ္ပါယ်သာမရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံဟာ အင်တာနက်ပေါ်က တခြားသောသန်းပေါင်းများစွာသောပုံတွေနဲ့ဘာမှမထူးခြား ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့ မာဒ္စင် ကပြောပါတယ်။
မိတ်ဆွေရှာဖွေရမယ့် နေရာက မီးပန်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း အနှောင့်အယှက်မရှိ မြင်နိုင်တဲ့နေရာပါ။ လေတိုက်ရာလမ်းကြောင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မီးခိုးတွေမိတ်ဆွေဆီကိုဝင်လာပြီး ပုံကိုဖျက်ဆီး မှာမိတ်ဆွေ မလိုလားပါဘူး။ လေသာတိုက်မနေပါက ပထမဆုံးရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံကအပြတ်သားဆုံးဆိုတာလဲ မိတ်ဆွေတွေ့ရှိရမှာပါ။
လေသာတိုက်မနေရင် မီးခိုးတွေကဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီပုံကြည့်သိနိုင်ပါတယ်။ Canon 60D Sigma 18-270mm. Sydney, New Year’s Eve 2014
ဓာတ်ပုံ ရိုက်မယ့်နေရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာ မီးပန်းဓာတ်ပုံတစ်ခုရဲ့အရေးအကြီးဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မီးပန်းတွေဘယ်နေရာမှာပေါက်ကွဲမလဲဆိုတာကိုကြိုတွက်ရမည့်အပြင် ပုံရဲ့အရှေ့ foreground မှာ ဘာရှိနေမယ်ဆိုတာကိုလဲ ကြိုတွက်ရပါမယ်။ ဆက်စပ်အဓိပ္ပါယ်သာမရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံဟာ အင်တာနက်ပေါ်က တခြားသောသန်းပေါင်းများစွာသောပုံတွေနဲ့ဘာမှမထူးခြား ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့ မာဒ္စင် ကပြောပါတယ်။
မိတ်ဆွေရှာဖွေရမယ့် နေရာက မီးပန်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း အနှောင့်အယှက်မရှိ မြင်နိုင်တဲ့နေရာပါ။ လေတိုက်ရာ လမ်းကြောင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မီးခိုးတွေမိတ်ဆွေဆီကိုဝင်လာပြီး ပုံကိုဖျက်ဆီး မှာမိတ်ဆွေမလိုလားပါဘူး။ လေသာတိုက်မနေပါက ပထမဆုံးရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံဟာအပြတ်သားဆုံးဆိုတာလဲ မိတ်ဆွေတွေ့ရမှာပါ။
၎င်းနောက် မီးပန်းမဖောက်မှီမြင်ကွင်းကို လင်းရှင်းစွာ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားရပါမယ်။ ဆက်ဖတ်ပါ။ အနောက်တွင်ဆက်ရှင်းပြပါမယ်။
Stewart Marsden – Original composition photo. Pentax 645Z HD PENTAX-DA 645 28-45mm F4.5ED AW SR
5. Focus ထားခြင်း
ကင်မရာကို မန္နူရယ်မှုသို့ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ focus ကိုလည်းကြိုချိန်ထားရပါမယ်။ အလွယ်ကူဆုံးအနေနဲ့ lens ကို infinity မှာထားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ်နေရာမှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်။ အဆောက်အဦးတွေရဲ့ အနီးအနားမှာဆိုရင် ၎င်းအဆောက်အဦးတွေကို focus ပြတ်အောင် ဖြတ်သင့်ပါတယ်။ နေရာအပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါ။ auto focus သာသုံးမိပါက ကင်မရာသည် မှောင်နှင့်မဲမဲထဲတွင် focus ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသဖြင့် ပုံတွေကိုရိုက်မရဖြစ်စေပါတယ်။
အပေါ်မှာရှင်းပြထားတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ပြီးပါက ကင်မရာမှာထားရမယ့် အပါရှာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါပြီ။ မီးပန်းဖောက်တဲ့အခါ ထွက်တဲ့အလင်းဟာ လင်းထိန်လှတာကြောင့် ၎င်းရဲ့အလင်းအမှောင်ကိုလိုက်ပြီး တစ်ခွဲကနေ သုံး stop ထိအပါရှာကို ချရိုက်ဖို့ မာဒ္စင် ကပြောပါတယ်။
noise တွေမထအောင် ISO ကိုတတ်နိုင်သမျှ ငယ်ပါစေ။ မီးပန်းရဲ့ အလင်းကလည်းများတာမို့ under exposure ဖြစ်ဖို့မပူရပါဘူး။ flash လဲမလိုပါဘူး။ flash ကိုသုံးလိုက်ရင် ပုံထွက်ပိုပြီးဆိုးသွားမှာပါ။ flash ကမီးပန်းကိုမရောက်နိုင်တဲ့အပြင် ပုံကိုပျက်စီးစေပါတယ်။
Bulb mode ကိုသုံးပါ။ remote release ကိုအသုံးပြုပြီး မီးပန်းပေါက်ချိန်ကို စောင့်ရိုက်ပါ။ မီးပန်ဖောက်ချိန်မှာ ရှပ်တာကိုဖွင့်ထားပါ။ ရှစ်စက္ကန့်ကနေ ဆယ့်ငါးစက္ကန့်ထိ ရှပ်တာကိုဖွင့်ထားဖို့ မာဒ္စင်က ပြောပါတယ်။
ရှပ်တာဖွင့်တာကြာလေလေ ပုံကပိုလင်းလေလေဖြစ်ပြီးမှာမို့ ISO နဲ့အပါရှာကို လိုအပ်ရင်လျှော့ရပါမယ်။
9. RAW ကိုအသုံးပြုပါ
Stewart Marsden. Pentax 645Z HD PENTAX-DA 645 28-45mm F4.5ED AW SR
ကင်မရာရဲ့ display မှာပေါ်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ကွန်ပြူထဲမှာ process လုပ်ပြီးပုံနဲ့ camera display ပေါ်ကပုံက ဆီနဲ့ရေလိုကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီးပန်းဓာတ်ပုံကို post processing အလုပ်ခံတဲ့ RAW နဲ့ရိုက်သင့်ပါတယ်။ exposure အမှန်ကို ကင်မရာထဲမှာရရှိနိုင်သင့်သော်လည်း RAW file ကို post processing လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိလိုအပ်တဲ့ပုံကိုရရှိဖို့ပိုသေချာပါတယ်။
10. ရိုက်ကူးပြီး ကွန်ပြူတာအသုံးပြု၍ process ပြုလုပ်ခြင်း
မီးပန်းမဖောက်ခင် ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို မှတ်မိသေးသလား။ ဒီပုံကိုသုံးရရမယ့် အချိန်ရောက်ပြီလေ။ မီးပန်းရဲ့အလင်းစူးရှလွန်းတာကြောင့် အလင်းလျှောရိုက်ထားတဲ့ပုံထဲမှာ foreground ကမှောင်မဲနေပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် စောစောကရိုက်ထားတဲ့ ပုံရဲ့ foreground ကို မီးပန်းပုံရဲ့မဲမှောင်နေတဲ့ foreground မှာထပ်ရပါမယ်။ Photoshop မှာ layers နဲ့ luminosity ကိုသုံးပြီး ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ curves နဲ့ levels ကိုသုံးပြီး ထပ် adjust လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပုံနှစ်ပုံလုံးရဲ့ အလင်းအမှောင်ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ပုံဟာ တစ်ပုံထဲရိုက်ထားတဲ့ပုံထက် အများကြီးကြည့်ကောင်းမှာပါ။
အောက်ကပုံမှာ before and after ကိုယှဉ်တွဲပြထားပါတယ်။
Stewart Marsden Pentax 645ZHD PENTAX-DA 645 28-45mm F4.5ED AW SR.
နောက်ပြီးတော့ ကင်မရာနဲ့ setting တွေကအရေးကြီးသလို မိတ်ဆွေရဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ထိုင်စရာလေးနဲ့ စားစရာသောက်စရာလေးတွေယူဆောင်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့။